FITONDRANA HVM : Fanovàna Governemanta mihatsaravelatsihy !
Any amin’ ny tsy mivonto no manaintaina ! Izay raha fehezina ny fanapahan-kevitra noraisin’ ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery momba ny fanovàna Governemanta. 21 avril 2017
Raha ny tena marina mantsy, ireo minisitera tsy misy fiantraikany mivantana amin’ ny fiainam-bahoaka no nasiam- panovana. Omaly, tamin’ny 3 ora tolakandro, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha no namoahana ny tamin’ny fomba ofisialy ny didim-panjakana mahakasika ity fanovàna Governemanta ity. Raha tsorina dia karazan’ny fihatsaram-belatsihy sy fialana bala fotsiny no nataon’ny Fitondrana Rajaonarimampianina.
Isan’ireo naverina amin’ny toerany, ohatra, Rahajason Harry Laurent (Rolly Mercia), izay notendrena ho minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana indray. Efa nitana io toerana io izy teo aloha saingy nahay namadika palitao sy nitsipa-doha laka-nitana, ka nahazo avara-patana ao anatin’ny Fitondrana Hvm.
Isan’ny nosoloina ihany koa ny minisitry ny Rano, Ravatomanga Rolland, izay olon-dRavalomanana Marc sy efa ela nipetrahana teo amin’io toerana io. Efa naharitra taona maro no naha minisitra azy. Ny minisitry ny Vola sy ny fitantanam-bola teo aloha sady tale jeneralin’ny orinasa Jirama, Rasoloelisoa Lantoniaina no nasolo azy. Ity farany izay no voatendry ho minisitry ny Rano sy ny Angovo ary ny akoran’afo. Nosoloina ihany koa ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena.
Olom-baovao kosa no voatendry ho Sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, misahana ny Zandarimariam-pirenena, dia ny Jeneraly Randriamahavalisoa Razafindramaitso Girard. Voatendry ho Sekreteram- panjakana lefitra eo anivon’ny Raharaham-bahiny miadidy Fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana kosa i Bary Rafatrolaza. Ankoatra ireo efatra ireo izany dia tsy nisy niova ny mpikambana eo anivon’ny Governemanta, izay tarihin’ny Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Sasa-piso ihany ny fandraisan’ ny mpanara-baovao ity fanovàna natao tampotampoka ity. Raha ny tsy fandehanan’ ny raharaham-pirenena, dia tsy ireo minisitera efatra nasiam-panovàna ireo ihany no tompon’ antoka tamin’ izany. Nodian’ ny Filoham-pirenena tsy nojerena mihitsy ve izany ireo raharaha nafampana teto amin’ ny Firenena ka nahavoa- tonontonana ny anaran’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier ?
Isan’ ireny, ohatra, ny raharaha Ambohimamasina sy ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Raha ireto olana roa farany dia tsy noheverina mihitsy ny mbola nahavotazona an’Ingahy Praiminisitra tamin’ ny toerany. Nanome henatra ny Firenena koa ny fampandosirana ilay mpandraharaha tompon’ ny A&C tany am-pitandranomasina. Lasa raharaha iraisam-pirenena iny olana iny, izay nijabahan’ny minisitry ny Fitsarana. Manoloana izany, ity farany dia notombanan’ ny maro ho tafiditra ao anatin’ ireo minisitra voailika saingy mbola voatazona amin’ ny toerany soa aman-tsara. Midika inona ny tsy nanesorana ny minisitry ny Fitsarana izay nanome baiko ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly hamotsotra ny olona voarohirohy amin’ ny raharaha maloto ? Sa isan’ ireo olona mpiray donak’ afo tokoa izy ka tsy azo nokitikitihina.